के ! बजेटले सहकारीलाई सम्बोधन गर्न सक्यो ? :: Sahakari Akhabar
के ! बजेटले सहकारीलाई सम्बोधन गर्न सक्यो ?
२०७८ जेष्ठ १७ गते , सोमवार Sahakari Akhabar
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत ८ अर्व २१ करोड रकम विनियोन गरिएको छ । बजेटले सहकारीलाई कति सम्बोधन गर्न सक्यो ? यसै विषयमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले आइतबार भर्चुअल रुपमा आयोजना गरेको ‘बजेटमा सहकारी’ विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रतिकृया दिदै बक्ताहरु ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकर प्रकाश श्रेष्ठले बजेटमा सहकारीले उच्च प्राथिमकता पाएको बताएका छन्।सहकारी अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भ भएकाले सरकारले बजेटमा सहकारीलाई महत्व दिएको बताए । श्रेष्ठले सहकारी उत्पादनतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । उत्पादन, बजारीकरण रोजगारी बढाउन बजेटले सहकारीलाई स्थान दिएको उनको भनाइ छ।
श्रेष्ठले सहकारीमार्फत उत्पादन बढाउनुको विकल्प नभएको बताए । देश विकास गर्न २९ हजार सहकारी पर्याप्त भएको उनले बताए । १० महिनामा १२ खर्बको आयात भएको भन्दै सहकारीमार्फत उत्पादन बढाएर निर्यात घटाउन सकिने बताए । ‘कृषि उत्पादनमै ठूलोमात्रामा आयात गरिरहेका छौं ।’
उनले भने, ‘अब सहकारीले उत्पादन अभियान चलाउनुपर्छ ।’ पुँजीगत र प्रोत्साहन अनुदानले सहकारीमार्फत उत्पादन बढ्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । कार्यविधि बनाएर गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रम र सहुलियत कर्जा अघि बढ्ने उनले बताए । ३२ हजार समूह सहकारीमा रुपान्तरण गरी १९ अर्ब रकम सहकारीमार्फत परिचालन गर्दा प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।
संमृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियान सार्थक बनाउन र समाजवादतर्फ अघि बढ्न सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान हुने उनले बताए । एकीकृत सहुलियत निर्देशिका संशोधन गरी सहकारी र लघुवित्तमार्फत गाउँगाउँसम्म पुर्याउन आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।
सहकारीले सदस्यको जीवनस्तर सुधार गर्न नसकेको उनले गुनासो गरे । ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी जानुपर्ने भएपनि शहरकेन्द्रीत भएको उनको भनाइ छ । सहुलियत कर्जा होलसेलर मार्फत जान सके जीवनस्तर सुधारमा सघाउ पुग्ने उनले बताए ।
सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्रराज पौडेल सहकारीले सुकिला मुकिलाको मात्र नभई निम्न वर्गसम्म पुग्नुपर्ने बताए । जनताको बचत सिधैं अरु क्षेत्रमा लगाउन नमिल्ने उनको भनाई थियो । ऐन र नियमावी अनुसारनै कर्जा सूचना केन्द्र आउने उनले बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले बजेटले सहकारीका धेरै विषय समेटेको बताए । ‘बजेट नराम्रो भन्न मिल्दैन ।’ उनले भने,‘सहकारीलाई वित्तीय पहुँच, रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा ध्यान दिइएको छ ।’
डिजिटाइजेनसनमा जान बजेटमा सम्बोधन नभएपनि नियमक निकायबाट समन्वय गरेर अघि बढ्ने उनले बताए । गरिबी निवारण कोषबाट ३२ हजार समूहबाट ४ सय सकारी थपिन सक्ने उनले बताए ।
कर्जा सूचना केन्द्र समेट्न नसकेपनि समग्रमा बजेट राम्रो रहेको बताए । कोपोमिसमार्फत नभई नियमावली अनुसार विशिष्टीकृत ढाँचामा सूचना केन्द्र आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बजेट राम्रो आएपनि कार्यान्वयन हुने प्रति शंका गरे । ‘ऋण लगानीमा अग्रिम कर नलाग्ने, सहुलियत कर्जा, अनुदान व्यवस्था राम्रो भएपनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो ।’
उनले भने,‘कार्यान्वयन गर्न तीनै तह सक्रिय हुनुपर्छ ।’ सहकारी ठूलो भोलुममा उत्पादन, बजारीकरणमा जोडिन सकिने बताए । सरकार र अभियान समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । ७ प्रतिशतमा बचत लिएर ६ प्रतिशतमा लगानी गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल बचत सहकारीले सदस्यमार्फत लगानी गरी उत्पादन बढाउने बताए । ‘सदस्यलाई वित्तीय पहुँच र वित्तीय अवसर सिर्जना गर्ने हो’ उनले भने,‘साकोसले आफै लगानी गर्न सक्दैन ।’ अन्तर सहकारी कारोबार अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । बहुउद्देश्यीय सहकारी वित्तीय मापदण्डमा नपर्ने उनले दावी गरे ।
केन्द्रीय दूग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष नारायण देवकोटाले कृषि र सहकारी मन्त्रालबाट सहकारीमार्फत उत्पादनमा जोड दिएको बताए ।
‘उत्पादनसँगै बजारीकरणमा र उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने विषय सकारात्मक छ’ उनले भने । सहकारी साझेदारीमा दूध प्रशोधन कारखाना खोल्न ३५ प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रम सकारात्मक भएको बताए ।
केन्द्रीय कृषि बिउ सहकारी संघका अध्यक्ष विनोद पराजुलीले बजेटले सहकारकिो समग्रमा उपलब्धिमूलक र समयसापेक्ष भएको बताए ।
कृषिलाई जोड दिएर गरिबी निवारण र आयआर्जनमा जोड दिनु सह्राहनीय भएको बताए । ‘बजेटको प्राथमिकता भित्र सहकारी परेको छ ।’ उनले भने,‘उत्पादन प्रोत्साहनमा आधारित सहुलियत अनुदानले उत्पादन बढाउन मद्धत मिल्छ ।’
२०७८ जेष्ठ १७ गते , सोमवार